Intengiso yePodcast: Kutheni iinkampani zityala imali kwiPodcasting | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 21, 2017 NgoLwesihlanu, Septemba 22, 2017 Douglas Karr
Kwinyanga ezayo ndiya eDell kwinkomfa yentengiso abayinika iinkokeli zeshishini ngaphakathi. Iseshoni yam yiseshoni yezandla apho ndiza kube ndabelana ngendlela ipodcasting ekhule ngayo ekuthandeni, zeziphi izixhobo ezifunekayo, kunye nendlela yokupapasha, ukudibanisa kunye nokukhuthaza ipodcast yakho kwi-intanethi. Sisihloko endinomdla kakhulu kuso kwiminyaka embalwa edlulileyo- kwaye ndiziva ngathi ndifunda ngakumbi inyanga nenyanga.
Ngokombono wam, kukho iindlela ezithile abathengisi abanokuthi basebenzise ngayo iipodcast kwimizamo yabo yentengiso:
Education -Amathemba kunye nabathengi bayathanda ukumamela iipodcast ukuze bafunde ngakumbi ngeshishini labo kunye nendlela yokusebenzisa kakuhle iimveliso kunye neenkonzo onokuthi uzinike. Amacandelo emfundo angakhokelela ekusetyenzisweni okungcono, ukugcinwa, kunye nokunyuka kwamathuba.
Impembelelo -Kuba ubunkokeli bakho benziwa udliwanondlebe nomnye umntu onepodcast okanye umemelele umphembeleli kwi-podcast yakho, ulwandiso lwabaphulaphuli lufanele umzamo. Ukuzisa impembelelo kuya kubonelela ngexabiso kubaphulaphuli bakho kwaye kukuqinisekise njengegunya kwishishini lakho. Ukungena kwipodcast yempembelelo kuya kuvulela abaphulaphuli bakho kwaye kukuqinisekise njengegunya ngokunjalo.
Advertising Ngelixa iinkampani ezininzi zingayenzi, i-podcast ihlala iphulaphulwa ngabaphulaphuli. Bajonge, kwaye lixesha elihle lokuba ubazise kwimveliso yakho okanye ubanikeze inkonzo. Phosa ikhowudi yokunikezela kwaye unokulinganisela nokuba yeyiphi impembelelo yentengiso yakho yepodcast. Kwaye, ewe, ngoku kukho amathuba okupapasha kwezinye iipodcast!
Generation Generation -Ndayiqala ipodcast yam kuba ndifuna ukudibana nokusebenza neenkokheli ezininzi kumzi mveliso wethu. Kwiminyaka kamva, bendinobuhlobo obumnandi beshishini kunye neenkampani esenze udliwanondlebe nazo kwi-podcast yethu.
Iphepha lewebhu le-FX libeka ndawonye le infographic, Kutheni iMicimbi yePodcasting kubathengisi, ukubonelela ngengqondo ethile malunga nokukhula, amaqonga, izibonelelo, iimetrikhi, kunye nentengiso.
tags: Intengiso kwiiPodcastintengiso yepodcastintengiso yePodcastPodcasting